theZOMI: [aurorageneration] Re: မွတ်စလင်များသို့ပေးစာ
[aurorageneration] Re: မွတ်စလင်များသို့ပေးစာ
.ခွေးရူးအရေး .မြန်မာတွေသွေးမအေးရအောင် လာလာပြီးဇာတိပြနေသူတို့ကို ကျေးဇူးတောင်တင်ရဦးမှာဗျ.... အဒီ မအေမီရဲ.စကားကို... ကျနော် အသိအမှတ်ပြုပါတယ်.... မြန်မာ.အရိပ်နေပြီး မြန်မာလူထုကို..ဆော်ကားးးး
သားရေးပေါ် အိပ် သားရေနားစား ချီးပေ ဇာတ်နိမ်.မါတ်ဆလင်ကုလားလောက် အောက်တန်းကျ စုတ်ပဲ.တဲ. တိရစ္ဆာန် တစ်ခါမှ မတွေ.ဖူး ဘူး မအေမီရေ.... ကသိညဏ်နိမ်.တဲ.ခွေးတိရစ္ဆနာတောင် နေစရာ စားစရားပေးထားတဲ. သခင်.အိမ်ကိုပြန်မဟောင်တတ်သလို. သခင်ရဲ.အရိပ်အောက်မှာရှိတဲ. သား သမီးမြေး မြစ်တွေနဲ.အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို... တပါးသူတွေမထိပါးအောင်ကာကွယ်စောင်.ရှောက်ပေးတတ်ပါတယ်....
မြန်မာ.ရေသောက်ပြီး မြန်မာထမင်းစား... မြန်မာ.အရိပ်.နေပြီး မြန်မာလူမျိုးကို ပြန်ဆော်ကား
ဟောင်နေတဲ. အစံန်းရောက် ၈ျီဟတ်မိသားစု...ကုလားတွေနဲ.နှိုင်းဆရင် ခွေးတိရစ္ဆာန်ကမှ..ကုလား အဟိတ်တရစ္ဆာန်ထက်
အသိညဏ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မြင်နိင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.....
2013/3/29 Mr Sit Thwe <mrsitthwe@gmail.com>
သတ္တိခြင်းလည်းယှဉ်ဖို့မလိုဘူး..စကားလုံးတွေနဲ့လည်းယှဉ်ဖို့မလိုဘူး...သည်းခံတတ်တယ်..သနားတတ်တယ်...ခိုနားရာပေးတတ်တယ်...ဒါပေမယ့် စော်ကားတာကိုခေါင်းငုံ့မခံတတ်ဘူး..အဲဒါမြန်မာ့စိတ်ဓာတ်ပဲ...ဒီလောက်နဲ့မှ မမှတ်သေးရင်လည်းဆက်ပြီးရိုင်းနိုင်သည် မွတ်ကုလားများ....အကျိုးဆက်များကိုတော့ မင်းတို့ခံစားရမယ်ဆိုတာတော့ ကြိုသိထားကြတော့....
မထားသီရေ...ယှဉ်ပြောမနေပါနဲ့ဗျာ..သူတို့ဘာသာသူတို့ .အော်ကြဟောင်ကြအူကြစမ်းပါစေဗျာ...သူတို့မှာ ဒီအလုပ်ပဲရှိတာ.အိပ်မယ်..စားမယ်.....အူမယ်..ဟောင်မယ်..ကိုက်မယ် ...ဒါတွေပဲသူတို့ကလုပ်တတ်တာ...ခွေးတောင် ရိုးရိုးခွေးဟုတ်ရိုးလားဗျာ..ရိုးရိုးခွေးတွေက သခင်ကို ကျေးဇူးသိတတ်တယ်..သူတို့ ခွေးရူးတွေဗျ...သူတို့တစ်ကိုယ်လုံးခွေးရူးရောဂါပိုးတွေ ပျံ့နှံ့နေတော့ သခင်ကိုသခင်မှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့.....ဆက်ပြီးဟောင်ကြစမ်းပါစေဗျာ........ခွေးရူးအရေး .မြန်မာတွေသွေးမအေးရအောင် လာလာပြီးဇာတိပြနေသူတို့ကို ကျေးဇူးတောင်တင်ရဦးမှာဗျ....ဆက်ပြီးလုပ်ကြစမ်းပါစေ...တဖြေးဖြေးနဲ့သူတို့အတွက်ပြေးစရာနယ်နိမိတ်တွေကျဉ်းကျဉ်းလာပါပြီ...မြန်မာတွေလည်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေနိုးကြားလာကြပြီ...တစ်ကမ္ဘလုံးကို လှည့်ကိုက်နေတဲ့ခွေးရူးတွေကို သူတို့အမျိုးတူတွေကတောင် ရူးနေတဲ့စရိုက်တွေဝင်နေတဲ့ကောင်တွေမို့နိုင်ငံတွင်းမှာလက်မခံချင်ကြဘူးလေ...ဆော်ဒီကနေ မြန်မာပြည်က မွတ်ဒုက္ခသည် ငါးသိန်းကိုလက်ခံပေးမယ်ဆိုတာ ..မြန်မာပြည်ကနေလှမ်းခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး...ရောက်နေပြီးသားဒုက္ခသည်တွေကို ခိုလှုံခွင့်ပေးမှာကိုပြောတာ...မွတ်နိုင်ငံပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်ရှိတာဗျာ...သူတို့ကို လက်ခံမယ့်သူ ဘယ်မှာရှိလို့တုန်း...ကိုယ့်အချင်းချင်းအကြောင်းကိုယ်သိတယ်လေ...ဖိလစ်ပိုင်က မွတ်သူပုန်တွေကို ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးခင်က အဲဒီ့သူပုန်တွေကို အဓိကထောက်ပံ့တာ မလေးရှားအစိုးရပေါ့...နိုင်ငံတွင်းမှာ တံခါးမရှိဓားမရှိလည်း သွားလာခွင့်ပေးတယ်..နယ်စပ်တွေမှာ သူပုန်စခန်းတွေဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်..ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖိလစ်ပိုင်သူပုန်အဖွဲ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်က မလေးရှားလို့ပြောလို့ရတယ်...ဟိုးတစ်လောက ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကနေ ဖိလစ်ပိုင်မွတ်သူပုန်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ ရှာရီယာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာ ကြားလိုက်ကြမှာပေါ့....အဲလိုတွေဖြစ်ပြီးမကြာပါဘူး.....ကိုက်ချင်နေတဲ့ခွေးရူးတွေက သူများကိုမကိုက်ရရင် ကိုယ့်အချင်းချင်းပြန်ကိုက်ချင်တော့ ရန်ရှာတော့တာပဲ....ကျေူးဇူးကန်းလေ့ရှိတဲ့ ခွေးရူးတွေက ကျေးဇူးရှင်ကိုဖင်လှန်ပြတဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်တော့တာပဲ...အာခံတော့တာပဲ...ဟိုပုံပြင်ထဲက ပုတ်သင်ညိုကိုသွားသတိ၇မိတယ်...ဘုရင်ချီးမြှင့်တဲ့လည်ဆွဲကြီးဆွဲပြီး မာန်တွေတတ်ပြီး ဘုရင်ကိုတောင် အရိုအသေမပေးတော့တဲ့ပုံပြင်လိုပေါ့....အဲဒါထက်ဆိုးတာ ကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ကိုက်တာလေ...မလေးရှားအစိုးရကလည်း မွတ်အချင်းချင်းမို့သက်ညှာပါတယ်...တင့်ကားတွေ..အမြှောက်တွေနဲ့ဆက်တိုက်ချေမှုန်းပစ်တာ ဖွတ်ဖွတ်ကိုကျေလို့....နောက်ဆုံးရာဇသံတွေပေးပြီးအပြီးတိုင်ချေမှုန်းဖို့ခြေလှမ်းတွေတောင်ပြင်ထားတာဗျ....ကျူးကျော်ဘင်္ဂလီနဲ့ဌာနေရခိုင်တို့အရေးတုန်းက မွတ်အခွင့်အရေးကို အသံပြဲနဲ့ဝင်အော်ခဲ့တဲ့...OIC တို့...ဘာတို့...ဘယ်နားသွားသေနေကြသလဲမသိ.....ကိုက်စရာမရှိအချင်းချင်းပြန်ကိုက်...ကျေးဇူးတရားကိုခြေသုတ်ပုဆိုးစုတ်လိုသဘောထား....မွတ်ကုလားအခွင့်အရေးကိုမှ လူ့အခွင့်အရေးလို့မြင်တတ်တဲ့ကောင်မျိုးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောနေဖို့မလိုပါဘူး...အားလုံးပဲသိပြီးသားမို့ဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်...
2013/3/28 kdar kdar <kdar600@gmail.com>
အိမ်စွန့် အသက်စွန့် မင်းသွေးချင်းကသက်သေပြတယ်
2013/3/28 Ma Htar Thi <htarthi2010@gmail.com>
ရီစရာတော့ကောင်းသားပဲ ဟားးးးးးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးးးးဟားးးးးးးးးးးး